Ethandwa kakhulu ezemidlalo amanzi eRussia
Imidlalo eminingi yamanzi zaziwa kusukela ezikhathini zasendulo, njengoba amanzi abantu njalo bakhangwa. Othile anqobe isici lwamanzi emikhunjini, kuyilapho abanye bangene yena ukuze uthole kunamandla futhi umoya, futhi umzimba. Zonke lezi zimiso ziye zalondolozwa, futhi kamuva kwakheka isisekelo ezemidlalo eziningi zanamuhla, hhayi nje amanzi.
Uma sicabangela lokhu ngokuningiliziwe isiqondiso, amanzi ezemidlalo - yiliphi ezemidlalo ukuthi ngandlela-thile exhunywe ngamanzi, nakuba abaningi ngokwesiko lapha kuhlanganisa kuphela labo ukuthi zihlobene ngokuqondile ukubhukuda. Imincintiswano zingahlelwa njengenhlangano amanzi evulekile - imifula nolwandle, futhi ezitsheni ezikhethekile. Ikhumbula zonke ezahlukene, singasho ukuthi izinhlobo ezemidlalo ukuthi ngokwesiko kwenziwe phezu kwamanzi evulekile ezimbalwa kakhudlwana.
Kuwufanele unezela ukuthi lo mdlalo ngenkuthalo asathuthuka, unezela eyala entsha yama-Olympic aphethwe Championships ezehlukene nemithetho yawo. Ikakhulukazi, kuyafaneleka ukuthi muva wanquma ukusungula World Championship emanzini ezemidlalo, okuyinto izobanjelwa okokuqala eRussia, lo mcimbi uzoba 2015 e Kazan. Ngaphezu kwalokho, Championships ovamile ubhukuda, udayiva polo yamanzi, njll
Kunemikhakha ezivamile eziningana, okuyinto ukwehlukana ezemidlalo namanzi endaweni yokuqala, le division zibe iqembu futhi ngabanye, kukhona eminye yemidlalo ezisebenzisa ngamathuluzi ahlukahlukene eyengeziwe kanye nemishini. Njalo umdlalo has imithetho yayo siqu futhi izici zohlobo ngalunye oluphilayo zakwazi, futhi ngokuvamile kuba ngokuphelele ukuhluka kwabanye. Ngakho imithetho amanzi phansi ziphakamisa division zibe amaqembu ngenombolo egxilile abadlali. Nakuba esikhathini izinkulumo ukubhukuda ezivumelanisiwe kungenziwa abathintekayo izinombolo ezihlukene abasubathi.
Zonke imincintiswano nazo ihlukaniswe bodwa emikhakheni ethile. Njengomthetho, esigabeni eyinhloko mncintiswano esikalini nokuqashelwa enkundleni ngamazwe. Ungakhetha imincintiswano kazwelonke aphethwe ezweni elifanayo, yesifunda (isib, esehlanganise Europe kuphela), izwe. Ngokukhethekile ikhokhelwa ukuze ezemidlalo-Olympic lapha zihlanganisa: i-polo yamanzi, ukubhukuda, diving kanye ukubhukuda ezivumelanisiwe. Nokho, isibonelo, amanzi-Ukushushuluza kanye ngomkhumbi, nakuba kubhekwa kancane kancane ethandwa, kodwa namanje akhawunti inqwaba abalandeli.
Imidlalo yamanzi eRussia
Russia ibikade ifinyeleleka futhi uhlala ezweni lapho amanzi ezemidlalo is athuthukile. Kwahamba xaxa ezikhathini zasendulo, lapho iSoviet Union wawumatasa olwenziwa inkulumo-ze ezemidlalo, kuhlanganise ukubhukuda. Ngemva kokuwa kweSoviet Union, isimo usufinyelele ngokuphawulekayo, Wacishe sonke isizukulwane abafundi ukuthi wazizwa kweyishumi kamuva, okungukuthi, Manje. Nokho, isimo esinjalo kungabonakala nasemkhakheni yonke indawo. Manje ngenkuthalo olwenziwa Inqubomgomo ukubuyisela ezemidlalo isiRashiya, kuhlanganise namanzi emidlalweni yesikole, ezakhiwe amachibi kanye nezikhungo. Nokho, ngaphambi kokuba yonke le iqala ukuba nemiphumela, kuzothatha okungenani 5-10 kweminyaka.
Ngaphezu kwalokho, ngaphansi kohlelo olubizwa ngokuthi inqubomgomo evamile ebhekisela popularization kulendawo, abasekeli kwakhona, kanye nezinye ezemidlalo amanzi. Kwezinye izifunda kwaqala ukuthuthukisa scuba diving kanye snorkel amaphiko, kokubili phakathi abalandeli futhi phakathi ochwepheshe. Ezinye izimbangi zethu sebeqala ukukhuluma ngezinye imincintiswano international e Surf, nakuba kuba kunalokho okuhlukile ngokuqondene nalo mthetho.
Njengoba sekushiwo, uhulumeni limatasa likwesekele nokuthuthukisa amanzi ezemidlalo, manje izindawo ezintsha ezakhiwayo emadolobheni amaningi, ikakhulukazi, amanye amanyuvesi ukuthola usizo lwezimali lokusiza ukwakhiwa sangasese yokubhukuda.
"Raiders kwamathuna" horror mockumentary. Abalingisi, abadali indaba
Usizo - Uthango
Kwenzakalani uma sime ukukhonona ukwazi ngokuphila kwakho?
Kwabantu baseYurophu: umlando, izici, amasiko, amasiko, isiko, ulimi, inkolo, indlela yokuphila